Ekliziastis 1 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe niile bụ ihe efu (1-11)
Ụwa na-adịru mgbe ebighị ebi (4)
Anyanwụ anaghị akwụsị ịwa, ifufe anaghị akwụsị ife (5-7)
E nweghị ihe bụ́ ihe ọhụrụ n’ụwa (9)
Amamihe mmadụ enweghị ebe o ruru (12-18)
Ihe niile bụ ịchụ ifufe (14)
1 Okwu onye mkpọkọta,+ nwa Devid, kwuru. Ọ bụ eze na Jeruselem.+ 2 Onye mkpọkọta kwuru, sị: “Ihe niile bụ nnọọ ihe efu! Ihe niile bụ nnọọ ihe efu! E nweghị ihe nwere isi!”+ 3 Olee uru mmadụ na-erite n’ọrụ niile ọ gbara mbọ rụọ,N’ọrụ niile ọ rụsiri ike n’ụwa?*+ 4 Otu ọgbọ na-agafe, ọgbọ ọzọ na-abịakwa,Ma ụwa na-adịru mgbe ebighị ebi.+ 5 Anyanwụ na-awa, anyanwụ na-adakwa;Ọ na-emekwa ngwa ngwa laghachi n’ebe o si awa.+ 6 Ifufe na-efega n’ebe ndịda, ọ na-eferekwa gaa n’ebe ugwu;Ọ na-efegharị otú ahụ n’akwụsịghị akwụsị; ya fere gbadaa, ya efere gbagoo. 7 Iyi niile na-asọba n’oké osimiri, ma oké osimiri anaghị eju eju.+ Iyi ndị ahụ na-asọrọ laghachi n’ebe ha si ka ha wee sọpụta ọzọ.+ 8 Ihe niile na-agwụ ike. E nweghịdị onye nwere ike ịkọwa ha. Ike anaghị agwụ anya ịhụ ihe;Ike anaghịkwa agwụ ntị ịnụ ihe. 9 Ihe ndị dịbu adị bụ ihe ndị ga-adị,Ihe ndị e meburu bụkwa ihe ndị a ga-eme ọzọ. E nweghị ihe bụ́ ihe ọhụrụ n’ụwa.*+ 10 È nwere ihe mmadụ ga-ekwu banyere ya, sị, “Lee ihe a, ọ bụ ihe ọhụrụ”? Ihe ahụ dịbu adị kemgbe ogologo oge gara aga;Ọ dị adị tupu oge anyị. 11 E nweghị onye na-echeta ndị oge gboo. E nweghịkwa onye ga-echeta ndị a ka ga-amụ amụ. Ndị a ka ga-emecha mụọ agaghịkwa echeta ha.+ 12 Mụnwa, bụ́ onye mkpọkọta, bụ eze Izrel nke na-achị na Jeruselem.+ 13 M kpebiri iji amamihe mụọ ihe niile e merela n’ụwa*+ ma nyochaa ha,+ ya bụ, ọrụ ahụhụ Chineke nyere ndị mmadụ ka ha na-arụ. 14 M hụrụ ọrụ niile a na-arụ n’ụwa.* Ma lee, ihe niile bụ ihe efu. Ha bụ ịchụ ifufe.+ 15 A gaghị edozili ihe gbagọrọ agbagọ,A gaghịkwa agụli ihe na-adịghị adị ọnụ. 16 M kwuziri n’obi m, sị: “Amatala m ihe nke ukwuu karịa onye ọ bụla bu m ụzọ bie na Jeruselem.+ Enwetala m amamihe dị ukwuu. Ihe m mụtara karịkwara akarị.”+ 17 M gbalịrị ka m ghọta ihe bụ́ mmadụ inwe amamihe, ihe bụ́ mmadụ izuzu nzuzu, na ihe bụ́ mmadụ ịdị iberiibe.+ Ma m chọpụtara na nke a bụkwa ịchụ ifufe. 18 N’ihi na ọ bụrụ na mmadụ ma ihe nke ukwuu, ike ụwa ga-agwụ ya. N’ihi ya, onye na-amụtakwu ihe na-akpatakwuru onwe ya obi ọjọọ.+